ကတ်ကြေးစာမိသွားသည့် အနာဂတ်လှိုင်းများ | YoeYar CG Blog
U can walk.
ဂျပန်-မဲခေါင် အပျော်တမ်း ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ ပြိုင်ပွဲသို့ ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်သူ ၅၈ ဦးအနက် ၁၈ ဦးရွေးချယ်ခံရ။
အမှတ်မဲ့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ သြော်… ငါတို့မြန်မာတွေ တော်ကြရှာသားပဲ။ ၁၈ ယောက်တောင် ဆုတွေရသွားကြတာကိုး ဆိုပြီး မုဒိတာ ပွားစရာ သတင်းလေးပေါ့။ ဆုရတဲ့လူငယ်တွေက ဂျပန်ကို လေ့လာရေးခရီးသွားကြရမှာဆိုတော့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် ပျော်စရာကြီးပေါ့။ ကိုယ့်လက်ရာကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုတာလည်း ခံရ..၊ ဂျပန်ကိုလည်း ရောက်ဖူးသွား။
မိတ်ဆွေ… ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းက ကွန်ပျူတာ ခန်းထဲကို “ကြိုရွေးထားသူမဟုတ်လို့” ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အဝင်မခံတာ ကြုံဖူးပါသလား။ ကျောင်းစောင့်က ကျောင်းထဲပေးမဝင်လို့ စာမေးပွဲ မဖြေလိုက်ရတာမျိုးရော ကြုံဖူးပါသလား။ သူများကလေးတွေ ဆော့သလိုမျိုး ပေးမဆော့လို့ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ငိုခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးရော ရှိခဲ့ဖူးပါသလား။
ဂျပန်-မဲခေါင် အပျော်တမ်း လူငယ်ဒါရိုက်တာပြိုင်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတာကို မီဒီယာမှာ တော်တော် နောက်ကျပြီးမှ ဖော်ပြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က စပ်စပ်စုစုနဲ့ အဲမှာ ဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေကို မေးကြည့်ပါတယ်။
“ဘယ်လိုလဲ။ ရိုက်ဖို့ရော အချိန်မီကြရဲ့လား။ ကင်မရာ ၅လုံး ငှားတယ်ဆို..။”
“အချိန်သိပ်မမီပါဘူးဗျာ။ ကင်မရာတွေကလည်း သူများတွေ ငှားထားကြပြီး တော်တော်နဲ့ ပြန်မပေးကြတာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ရှာဖွေပြီး ရိုက်လိုက်ရတယ်။”
“၄၄ ယောက် ဝင်ပြိုင်တယ်ဆို… ဘယ်နှကားလဲ.. ဆုကရော ဘယ်လိုပေးမှာတဲ့လဲ..”
“ဆုက မြန်မာပြည်အတွက် ၂ဝ သတ်မှတ်ပြီးသား… စုစုပေါင်း ၅၉ ကား ဝင်ပြိုင်ကြတယ်… အဲဒီထဲကမှ ပယ်သင့်တာပယ်ပြီး ကား ၃ဝ လောက်ကိုပဲ ပို့ပေးမယ်တဲ့..”
ကျွန်တော်စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ့်နှယ် ကလေးတွေရိုက်တာကို ဘာအကြောင်းပြပြီး ပယ်မှာလဲ..။ ဒီမှာပယ်လိုက်တဲ့ကားဟာ တခြားလူအမြင်မှာ ဆုရသင့်တဲ့ ကား ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှု မရှိဘူး။ အနုပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်း၊ ဖလင်တစ်ကွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆင်ဆာအကြောင်းပြ ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှ စိတ်ပျက် စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။ တစ်ကားလုံးသာ အဖြတ်ခံရတယ်ဆို စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါတော့။ သူတို့က ဆုပေးတဲ့ ဂျူရီတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို ရမ်းသမ်းလုပ်ခွင့် ရှိကိုမရှိတာ။
အဲဒါနဲ့ တခြားကိစ္စတွေနဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနေ့တော့ အွန်လိုင်းမှာ ဟိုလှန်ဒီလှောရင်း အဲဒီ သတင်းလေးကို တွေ့လို့ ဖတ်လိုက်မိတယ်။ ၁၈ ယောက်ပဲ အရွေးခံရတယ်ဆိုတော့ ဟင် ဘယ်လိုလဲဟ ဆိုပြီးတောင် ရေရွတ်မိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဝင်ပြိုင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို အွန်လိုင်းမှာတွေ့တော့ လှမ်းမေးလိုက်တယ်။
“မပြောချင်တော့ပါဘူး ကိုကြီးရာ… ဆင်ဆာလူကြီးတွေက စုစုပေါင်း ကားနှစ်ဆယ်ပဲ ရွေးပြီး ပို့လိုက်တယ်လေ.. ဂျပန်မှာ အဲဒီထဲက နှစ်ကား ပြုတ်တာပေါ့.. ကျနော့်ကားကတော့ ဒီမှာကတည်းက ပြုတ်သွားတာပေါ့… ထူးပြီးတော့ မခံစားးရတော့ပါဘူး ကိုကြီးရယ်..”
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်။ မခံစားရဘူးဆိုတဲ့ လေသံဟာ တုန်ရင်အက်ကွဲနေပါလား။ စုစုပေါင်း ကားနှစ်ဆယ်ပဲ ရွေးတယ်ဆိုတော့ ဆုရမဲ့ကားနှစ်ဆယ်ကို ဂျူရီအဖွဲ့က မဆုံးဖြတ်ခင် ကြိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့လေ..။ လုပ်ရက်လိုက်တာ။ ဒါ အနာဂတ်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မပျံနိုင်ခင် အကျဉ်းချထားလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဆင်ဆာအဖွဲ့ မျက်စိထဲမှာ မသင့်တော်ဘူး ထင်ပေမယ့် တခြားလူတွေမျက်စိထဲမှာ Masterpiece ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့။ အနုပညာဟာ လူကိုလိုက်ပြီး ခံစားမှုပုံစံ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ နူးညံ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူငယ်တွေ ဆု ရတာမရတာ အပထား… ဂျပန်ကို အခွေတွေ ရောက်တဲ့အထိ စိတ်ကူးယဉ်ခွင့်တောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မပေးတဲ့ ကိစ္စဟာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် မီဒီယာလို လူထုကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ နယ်ပယ်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အဆိပ်ခပ်လိုက်တာပါပဲ။
မြန်မာ့ ဆင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ရှာဖတ်လိုက်တော့ ဒီ ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုတည်းမှာတင်မဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ပြိုင် ဆင်ဆာအဖွဲ့ကို ဖြတ်သန်းပြီးမှသာ သွားရမယ်ဆိုပါတယ်။ အင်မတန်မှ နာကျင်ရပါတယ်။ အနာဂတ်ရဲ့ ပန်းလေးတွေ ကတ်ကြေးစာဘေးက ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ။
Enter the Space Travel
2 thoughts on “ကတ်ကြေးစာမိသွားသည့် အနာဂတ်လှိုင်းများ”
Aung Aung on January 20, 2010 at 10:58 pm said:
That’s so called Myanmar !
ပါကြီး on January 24, 2010 at 2:19 am said:
ဒါတွေကြောင့်တော့ အားလျှော့လို့ မဖြစ်ပါဘူး..ဆက်လုပ်မှဖြစ်မှာပါ..